कांग्रेसमा ‘मधेस फ्याक्टर’ « Anumodan National Daily
कांग्रेसमा ‘मधेस फ्याक्टर’
By : धर्मेन्द्र झा
प्रकाशित मिति : १३ असार २०७८, आईतवार ०८:०९
विगतमा झैँ कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पनि ‘मधेस फ्याक्टर’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ
काठमाडौं । आगामी भदौमा सम्पन्न हुने कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भले यतिखेर सम्बद्ध सबैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । महाधिवेशनको बढ्दो रापसँगै सभापतिको उम्मेदवारीको सन्दर्भले पनि पार्टीभित्र र बाहिर ताप बढाएको अनुभव गरिएको छ । जानकारहरूका अनुसार यस तापको उपस्थितिमा पार्टीको विद्यमान समीकरणमा उलटफेर हुन सक्छ र यसो भयो भने पृथक् परिणामको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्तो समीकरण उलटफेरमा ‘मधेस फ्याक्टर’को भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
कांग्रेस अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूह, पुरानो संस्थापन समूह, (जो हाल पौडेल समूहका नामले चर्चित छ) र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाको समूह गरी तीन समूहमा विभक्त छ । विगतको तेह्रौँ महाधिवेशनकै समयमा स्थापित यी तीन समूह हालसम्म पनि कांग्रेसमा क्रियाशील छन् । चौधौँ महाधिवेशनको समय नजिकिँदै जाँदा माथि उल्लेख गरिएका समूहबाहेक अन्य समूहको पनि उदय हुन सक्ने वा हालका समूहको पुनर्संरचना हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । हाल सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेकाहरूका कारण पनि कांगे्रसभित्रको गुटगत संरचनामा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।
विगतमा मधेस कांग्रेसको आधार क्षेत्र रहिआएको विदितै छ । आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि ‘मधेस फ्याक्टर’ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कांग्रेसको सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा कांग्रेसको मूल जनाधार क्षेत्र मधेसका कोही पनि यस पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन्, अर्थात् सभापति बन्न सकेका छैनन् । स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ, किन ? यस प्रश्नको उत्तर कांग्रेस नेतृत्व चयनका लागि सहभागी हुने मतदाताले नै खोज्नु जरुरी छ । मूलत: बुझ्नु के जरुरी छ भने मधेस पनि नेपाल हो र त्यहाँका बासिन्दाले विभेदमुक्त समतामूलक समाजको प्रत्याभूति चाहेका छन् ।
समतामूलक समाज र सम–अधिकारको कुरा गर्दा धेरैले भन्लान्, देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मधेसले हैसियत कायम गरिसकेपछि केको किचकिच ? तर, तिनैले अर्को प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नु अपेक्षित छ, नेपालको इतिहासमा आजसम्म किन कुनै मधेसवासी देशको कार्यकारी प्रमुखको पदमा र मूल लोकतन्त्रवादी तथा मूल वामपन्थी पार्टीको प्रमुख पदमा पुग्न सकेनन् ? योग्यता र क्षमता नै नभएर हो त ? विद्यमान समस्याको समाधान यसै आलोकमा खोज्नु जरुरी छ । हो, खास मधेसवासी पनि राज्य र पार्टीको सर्वोच्च र सम्प्रभुता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण पदमा अंगीकृतको रजगज चाहँदैनन् । तर, आफूहरूबारे सधैँ सबैले प्रश्न उठाइरहून् भन्ने पनि चाहँदैनन् । उनीहरू चाहन्छन्– मधेसलाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गरियोस् । कांग्रेसको भावी सभापति पद पनि यसै सन्दर्भसँग जोडिएको छ भन्दा अनुचित हुँदैन । कांग्रेसको भावी सभापतिको सम्बन्ध देशको भावी कार्यकारी प्रमुखसँग छ भनेर भनियो भने त्यो अनुचित हुनेछैन र यही कारण हो, कांग्रेस सभापति पदमा मधेसको दृष्टि छ ।
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा अनेक नेताको नाम चर्चामा आएसँगै एक नाम विशेष रूपले चर्चामा छ, उपसभापति विमलेन्द्र निधि । निधिको नाम चर्चामा आएसँगै मधेसका पार्टी कार्यकर्ताको पंक्तिमा एक किसिमले उत्साह थपिएको छ । पछिल्ला दिनमा भौतिक वा भर्चुअल बैठकमार्फत निधि स्वयंले आफ्नो उम्मेदवारीबारे प्रस्ट्याउँदै आएका छन् । यति मात्र होइन, उनले पछिल्लोपटक शनिबार पार्टी सभापति देउवा, जो विगत लामो समयदेखि उनका गुटीय नेता पनि हुन्,लाई प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गर्दै आफूलाई सभापतिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, निधिले देउवाबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएनन्, बरु देउवाले स्पष्ट रूपमा आफू पुन: सभापतिको उमेदवार हुने जनाउ दिए । देउवाको यो जनाउसँगै आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीमा नयाँ ढंगले जोड–घटाउ‘को प्रक्रियाले तीव्रता पाउने सम्भावनाको विकास भएको छ । यसको प्रमाणका रूपमा सोमबार महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्रको निवासमा बिपीपुत्र शशांक र गणेशमानपुत्र प्रकाशमानबीच सम्पन्न ‘लन्च’ बैठकलाई लिन सकिन्छ । निधिको वैवाहिक वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा भएको भनिएको बैठकमा पुराना नेतात्रयका पुत्रत्रयबीच के कुरा भयो, त्यसबारे यकिनसाथ त केही भन्न सकिँदैन । तर, शनिबार बुढानीलकण्ठमा व्यक्त देउवा प्रतिक्रियालगत्तै सम्पन्न नेतात्रयको यो बैठकमा आगामी महाधिवेशन र सभापतिको उमेदवारीका विषयमा पक्कै पनि कुरा भयो होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।
सम्भवत: पछिल्लो दशकमा आमजनताले थाहा पाउने गरी विमलेन्द्र, शशांक र प्रकाशमानबीच सम्पन्न भएको यो पहिलो बैठक स्वयंमा निकै महत्वपूर्ण छ र यस बैठकको सन्दर्भले कांग्रेसमा नयाँ समीकरण र ध्रुवीकरणतर्फ संकेत गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक ठानिनु हुँदैन । कांग्रेसका आमकार्यकर्ताको मनोदशाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका पार्टीका तीनैजना पुराना नेताप्रति कार्यकर्ता पंक्तिको अगाध आस्था र समर्पणभाव छ । यस अवस्थामा तीनैजना नेतापुत्र एक ठाउँमा गोलबद्ध हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ भने आमकार्यकर्ताको सहानुभूति यिनीहरूलाई प्राप्त हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यी तीनैजनाले आपसी सहमतिका आधारमा पद निर्धारण गरी सोहीअनुकूल महाधिवेशनमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गरेको अवस्थामा मतदाताले तिनलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्छन् ।
जहाँसम्म सभापतिमा निधिको उमेदवारीको सन्दर्भ छ, निधिको दाबीलाई प्राय: कसैले पनि अनुचित ठहर्‍याउन सकेका छैनन् । निकै लामो समयदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिको हिस्सा रहेका निधिले पार्टीको महामन्त्री र उपसभापतिको अनुभव सँगालिसकेका छन् । स्वयं निधिका अनुसार फेरि पुरानै पदमा दोहोर्‍याउनु उचित हुँदैन । यसैले राजनीतिलाई निरन्तरता दिने हो भने सभापतिमा उमेदवारी दिनुको विकल्प छैन । निधि थप्छन्, सभापतिमा उमेदवारी दिने नाममा अबको एक कार्यकाल कुर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
वास्तवमा पार्टीको सभापति बन्ने कुरा निधिको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जति जोडिएको छ, त्यतिकै समग्र मधेसको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको कुरा सम्बद्ध सरोकारवालाहरू बताउँछन् । खासमा निधिको पार्टी सभापति बन्ने आकांक्षा र रणनीति नयाँ होइन । पुरानो संस्थापन समूहमा आबद्ध हुँदा आफू सभापति बन्ने अनिश्चित रहेको अवस्थामा उनी देउवा समूहमा निरन्तर आबद्ध भइरहेकै भविष्यमा सभापति बन्नका लागि हो । देउवा समूहमा उनी सार्वकालिक दोस्रो नेताका रूपमा स्थापित भइरहे । देउवापछि आफूू नै उक्त गुटको नेता हुने र यो अवस्था आफू सभापति बन्न सहयोगी हुने विश्वास निधिको हो । निधिले तेह्रौँ महाधिवेशनमा देउवालाई नि:सर्त सभापतिमा स्वीकार गरी सहयोग मात्र गरेनन्, बरु देउवालाई जिताउन निर्णायक भूमिका पनि निर्वाह गरे । यस अवस्थामा निधिले १४औँ महाधिवेशनमा देउवा उम्मेदवार नहुने र गुटको उमेदवारका रूपमा देउवाले आफूलाई समर्थन र सहयोग गर्ने विश्वास गर्नु अनपेक्षित होइन ।
अहिले आएर देउवा स्वयं सभापतिका लागि पुन: इच्छुुक देखिएपछि निधि रनभुल्लमा पर्नु स्वाभाविक हो । जानकारहरूका अनुसार निधि अझै पनि देउवालाई आफ्नो पक्षमा ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजिरहेका छन् । तर, देउवा कन्भिन्स भएनन् भने के हुन्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न यतिखेर निधिसामु उपस्थित छ । यस्तोमा उनीसँग चारवटा विकल्प बाँकी रहनेछ । पहिलो, जसरी पनि देउवाको समर्थन प्राप्त गर्ने । दोस्रो, आफू र देउवा दुवैजना उमेदवार भएको अवस्थामा दुवैजना पराजित हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरी गुटको अस्तित्व रक्षाका लागि आफूले उमेदवारी नदिएर देउवालाई नै एकपटक पुन: सहयोग गर्ने । तेस्रो, नयाँ समीकरण बनाएर नयाँ गुटको समर्थनमा उमेदवार बन्ने र चौथो कुनै पनि गुट र समीकरणमा नलागी स्वतन्त्र उमेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुने । यी चारमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हो, निश्चय पनि निधि स्वयंले निर्णय गर्ने कुरा हो । एउटा कुरा निश्चित छ, पछिल्ला दुईमध्ये कुनै विकल्प रोज्ने निर्णयमा निधि पुग्छन् भने नयाँ समीकरण निर्माण भई कांग्रेस नयाँ ढंगले पुनर्संरचित हुने र नेपाली राजनीतिमा ‘मधेस फ्याक्टर’ नयाँ ढंगले परिभाषित हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।